Turkiga oo wali wada daabulka ciidamo uu ku xoojinayo xadka uu... | Universal Somali TV
Turkiga oo wali wada daabulka ciidamo uu ku xoojinayo xadka uu la wadaago suuriya
Xukuumada turkiga ayaa wali wada daabulka ciidamada iyo dabaabaadka dagaalka oo ay ku xoojineyso xuduudada ay dhanka koonfur galbeed kala wadaagto turkiga oo maalmo ka hor howlgal ay ka bilaabeen ciidamada suuriya oo garab ka helaya kuwa raashiya.
Turkiga ayaa ka gaashaamanaya firxadka dagaal yahanada hubeysan in ay dalkiisa gudaha u galaan taasi oo keeni karta in saameyn amni oo dhanka gudaha ay ku yeeshaan.
Daabulka ciidamada ayaa turkiga uu ku xoojinayo amniga dalkiisa ayaa bilowday aroornimadii shalay oo khamiis aheyd waxaana ciidamada ay gaareen magaalada Morek ee gudaha suuriya oo u dhow gobolka Hama.
Cutubyo ka tirsan ciidamada Milatariga turkiga ayaa diyaarado looga daabulay garoon ay isticmaalaan rayidka oo ku yaal gobolka Hatay.
Turkiga oo horay u marti galiyay qaxooti suuriyaan ah oo tiradoodu tahay 3.5 million oo suuriyaan ah ayaa ka baqdin qaba qul qulka qaxooti hor leh,xilli milatariga suuriya iyo ruushka ay bilaabeen duqeymo ka dhan ah gobolka Idlib oo ku haray gacanta kooxaha Mucaaradka.
Metin Gurcan,oo ah qabiir milatari oo u dhashay Turkiga ayaa sheegay in ujeedada laga leeyahay arintaan ay tahay sidii turkiga uu kaga hortagi lahaa saameyn amni daro oo gudaha dalkiisa ay ku yeelato howlgalka ka socda gobolka Idlib.
Kan-xigaDagaal yahano ka tirsan shabab oo lab...
Kan-horeSawiro:Kumanaan ruux oo isaga barakac...
53,450,602 unique visits